DRecovery 1.4.2.0 Portable...! | အိမ်လွမ်းသူ...
ကျွန်တော် ဒီတစ်ခါ DRecovery ...လေးတင်ပေးလိုက်ပါတယ်...! Portable လေးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် သုံးရတာ အဆင်ပြေမယ်လို့ထင်ပါတယ်...!ဖိုင်ဆိုဒ်ကတော့ 4.92 MB ရှိပါတယ်...! သုံးရတာ ရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးပါ...! ပျက်သွားတဲ့ ဖိုင်တွေကို အလွယ်တစ်ကူပြန်ယူနိုင်ပါတယ်...! လိုချင်ရင်တော့ အောက်မှာ Media Fire လေးဖြင့်တင်ပေးလိုက်ပါတယ်...!
No Response to "DRecovery 1.4.2.0 Portable...!"